Ama-Fall Guys Hacks 🥇 Ukukopela, i-Aimbot, i-ESP, iWallhack - iGamepron
Yiba yinkosi yomdlalo othandwa kakhulu ehlobo lika-2020! Sebenzisa i-FallGuys Hoplit hack yethu ukunqoba imidlalo eminingi ngendlela othanda ngayo.
Usuvele uthenge iHackGuys Hack? Thola izinyathelo ezilandelayo lapha
Uyacelwa uqaphele: Ngaphambi kokuthi uthenge ama-fallGuys hacks ethu, qiniseka ukuthi ithuluzi ofuna ukulithenga lisanda kubuyekezwa noma lisaxhumekile ku-inthanethi. Ngenkathi sihlala sibuyekeza amathuluzi ethu, kukhona ukubambezeleka kwesikhathi sokulethwa kwezinye izimo; ngenkathi kuvame ukushesha, kungathatha futhi amahora ambalwa. Onke amathuluzi ethu akhiyiwe nge-HWID, okusho ukuthi ungawasebenzisa kuphela kukhompyutha eyodwa - qiniseka ukuthi ikhompyutha yakho iyahambisana nawo wonke amathuluzi ethu ngaphambili. Akukho ukubuyiselwa kwemali okuzonikezwa uma usubonile ukhiye womkhiqizo!
Okukhethiwe kwethu UkuwaGuys Hacks
Ama-FallGuys Hacks, i-Aimbot, i-Norecoil, i-ESP, iWall Hacks nokuningi
Hoplit likaHack yilelo elaligqokwe
Thenga UkuwaGuys Hacks in 4 izinyathelo
Khetha inketho ye-Fall Guys ohlwini lwethu olukhulu lwemidlalo lapha eGamepron
Khetha wonke ama-hacks nezici ezihambisana nezidingo zakho bese uya esinyathelweni esilandelayo
Yenza inkokhelo yakho ngokugenca kwe-FallGuys usebenzisa iprosesa yethu yokukhokha evikelekile engu-100%
Manje njengoba usunokhiye womkhiqizo, thola ukufinyelela, bese ulanda i-FallGuys Hoplit hack!
Kungani ama-Gamepron FallGuys hacks?
I-Fall Guys ngumdlalo okuhloswe ukuba udlalwe kumnandi engqondweni, kepha noma kunini lapho kunemali engatholwa kumdlalo, kuzobakhona abadlali laphaya abazosebenzisa iMETA (Most Effective Tactic Around) . Yize lokhu akuyona into eyi-Fall Guys, kunezinto eziningana ongazenza ukusiza ukwandisa amathuba akho wokuwina! Yize lokho kuyiqiniso, okuwukuphela kokufanele ukukuzama ukusebenzisa ama-hacks we-Fall Guy ukuthola inzuzo ngaphezu kwezitha zakho. Yize kungesilo uhlobo lwendabuko lomdlalo ongasebenzisa ama-hacks kuwo, kusekhona isikhala esiningi ongasebenza naso uma kukhulunywa ngombuso wokugenca. Siyaqiniseka ukuthi uwabonile lawo mavidiyo wabaduni be-Fall Guy abandiza emoyeni futhi bathola ukunqoba ngokushesha, kanti ngenkathi abanye abantu bekuzonda, ungaba yilowo muntu!
I-Fall Guys ngumdlalo osuselwe ekushayisaneni osebenzise i-physics, okusho ukuthi uzohlala ulwa nezinto ngenkathi udlala. Ungagcina ngokuwina yonke le nto ngenxa yesibhaxu, noma "ungaphumelela" ekuphumeleleni ngenkathi udlala i-Hex-a-gone - izinketho zibukeka zingapheli emdlalweni onjalo onobudlova! Lapho kufanele ukhathazeke ngokushayisana nabanye abadlali, ungavele usebenzise iHackGuys Hoplit yethu yokugenca futhi ukhubaze ukushayisana ngokuphelele. Ungagijima uzungeze njengenkukhu enqunywe ikhanda futhi cishe usazowina, ngoba akekho ozokuphambanisa.
Enye into okufanele uyicabangele kuzoba yi- "Fly Mod" entsha nethuthukisiwe esethulwe ekugengeni kwethu kwe-FallGuys Hoplit. Ungandiza esibhakabhakeni ugqoke njenganoma yini oyithandayo kuma-Fall Guys, okusho ukuthi akukho lutho olungakuvimba ukuthi uzithwale (futhi kwesinye isikhathi, neqembu lakho) ukuze unqobe. Ukuthola iqembu elingalungile ku-Fall Ball kuyadina, kepha ungasebenzisa i-FallGuys Hoplit hack yethu ukunqoba noma ngabe yikuphi!
Shesha ukudlula nomncintiswano, njengoba kunendlela yokuqinisa isivinini ezokwenza isiqiniseko sokuthi ufika lapho ngaphambi komunye umuntu. Uma uku-Fall Mountain noma yini ezoklomelisa umdlali oshesha kakhulu, lokhu kuzoba yinto ezuzisa kakhulu ongayisebenzisa. Noma ngabe yini ofuna ukuyizuza ngenkathi udlala i-Fall Guys, singakusiza ukuyifeza lapha eGamepron.
I-FallGuys Player ESP
I-FallGuys Khubaza ukushayisana.
Imiphumela ye-FallGuys stun
Imodi ye-FallGuys Fly
Impela UkuwaGuys Hack Izici
Ukusebenzisa i-FallGuys yethu yokugenca odongeni kukunikeza ukufinyelela kuzinketho eziningi ezahlukahlukene ze-ESP (i-Extra Sensory Perception), konke okuzokuvumela ukuthi udlule ebalazweni kalula.
Imininingwane ye-FallGuys Player ESP (Igama, ibanga)
Ukubona abantu abagijima nawe kuhle ngaso sonke isikhathi, yize kwesinye isikhathi kungafihlwa. Ungalokothi uphinde uvalwe amehlo usebenzisa le nkohliso.
Into ye-FallGuys ESP enezihlungi
Ungabona zonke izithiyo nezinkinga ezahlukahlukene ezingahle zikuvimbe, konke okumele ukwenze ukunika amandla i-Item ESP ngezihlungi.
Ukuwa kweGuys Aimbot
Yize ingekho i-aimbot “yendabuko” kuleli thuluzi, usengayisebenzisa ngenkathi undiza ukuqinisekisa impumelelo (noma ngabe udlala yiphi inkambo).
Ithrekhi ye-FallGuys Hoplit Bullet
Akukho okulandela umkhondo wezinhlamvu ngaphakathi kwe-FallGuys Hoplit Aimbot yakho, noma usengalandelela izindlela zabadlali kwesinye isikhathi (njengeTip Toe).
Izexwayiso zesitha se-FallGuys
Ingabe kukhona isitha esiza ngemuva kwakho? Akunasidingo sokukhathazeka, njengoba i-FallGuys Hoplit hack inezexwayiso zezitha (izixwayiso zokushayisana) uma kungenzeka.
Imodi ye-FallGuys Hoplit super jump (akukho monakalo wokuwa lapho yenziwe yasebenza)
Imodi ye-Super Jump imvamisa iyashintsha umdlalo, kepha akukho monakalo owayo kulo mdlalo. Ungavele uyisebenzisele ukuqhubeka!
Ukhiye we-FallGuys nokhiye wokuhlose okulungisekayo
Ukubona njengoba ingekho i-aimbot ngaphakathi kwethuluzi le-FallGuys Hoplit, azikho izilungiselelo ezingalungiswa ze-aimbot. Kunezinye izinto eziningi eziwusizo!
Ukuhlolwa okubonakalayo kwe-FallGuys aimbot
Ukuhlolwa okubonakalayo kuvame ukubekelwa amageyimu afaka ukudubula nokusetshenziswa okuvelele kwe-aimbot, engatholakali lapho kusetshenziswa iHackGuys Hoplit Hack.
Isinxephezelo se-FallGuys Hoplit Recoil
Ukubuyisa isinxephezelo kudingekile kuphela uma udlala umdlalo wokudubula, ngakho-ke ngenkathi ungasetshenziswa ngokwesiko, ungawusebenzisa ngokuhlukile ngama-Fall Guys.
I-Fall Guys akuyona umdlalo wokuncintisana kakhulu ukucabanga ngokugenca ngaphakathi, kepha kukhona umuzwa okhethekile umuntu awutholayo lapho bebeka izandla zabo kulowo "Crown" ongaziwa. Lungisa amasethingi akho wejubane ukuze uqhume umncintiswano, kungakhathalekile ukuthi “banamakhono” kangakanani kubuciko be-Fall Guys - akekho ozoshesha noma andizele phezulu ngangokunokwenzeka ngale nkohliso. Qalisa namuhla ngokuthenga ukhiye
Ama-Hacks namaKopela adumile
I-FallGuys ESP neWallhack
Amanye ama-FallGuys Hacks nokukhohlisa
Ama-Fall Guys ngokusobala yi-hit yasehlobo, ngoba akekho umuntu ongagwema ukubuzwa ukuthi bangaki imiqhele ababenezinyanga ezimbalwa. Ngenkathi abanye bethi ukubhuza kufile kancane, kusekhona izigidi zabadlali abazinikele ekuthatheni izandla zabo kulelo golide! Ungasebenzisa imiqhele oyinqobayo ukuthenga izimonyo ezingaphakathi komdlalo, ezinye zazo ezingathengwa kuphela namaCrown. Lokhu kusho ukuthi awukwazi ukuthenga indlela yakho eya "ezintweni ezinhle", futhi ukuphela kwendlela yokuzithola ngokubonisa amakhono akho online!
Singathathwa njengabahlinzeki abadume kakhulu bama-Fall Guys hacks ngenxa yekhwalithi yamathuluzi ethu, kepha lokho akuyona into kuphela. Abasebenzisi bethu baqaphele ukuthi sinikela ngamathuluzi athengekayo kakhulu uma kukhulunywa “ngezinsizakalo ze-premium”, nokuthi iqiniso lokuthi i-Gamepron ibhekwa njenge-premium kusho ukuthi senza okuthile kahle! Joyina nathi namuhla bese uhlangabezana nalokho esingakunikeza khona.
Ngenkathi sishilo ukuthi ukusebenzisa i-Fall Guys Aimbot akudingekile, kunezinye izinto eziningi ezifakiwe ngaphakathi kwalokhu khohlisa okuzokwenza ukuwina umoya. Ngokwesiko, ungalindela ukuthola i-aimbot enamandla efakiwe kuningi lethu elikhishiwe - lokhu kungenxa yokuthi sihlanganisa imidlalo eminingi yokudubula. Kunezimo ezimbalwa lapho ukusebenzisa i-aimbot kuzoba yinzuzo esihlokweni esingadubuli, futhi lokhu kungaba esinye sazo! Ngeke nje ukwazi ukukhomba lapho ucindezela khona ibhola, kepha ungakhetha nokukhiya nakwabanye abadlali.
Amandla wokushaya njalo ilitshe lakho kuma-Fall Guys kungenzeka angabi oshintshashintsha umdlalo, kepha kungaba yisizathu sokuthi uwine umdlalo othile. Ngaso sonke isikhathi sifuna ukuthi amakhasimende ethu abe nezici eziningi azosebenza nazo ngangokunokwenzeka, futhi ukuqhekeka kwethu kwe-FallGuys Hoplit bekungeke kwehluke!
Ukusebenzisa i-ESP noma i-Wallhack ku-Fall Guys kungahle kungabonakali kukuhle kwabanye, kepha kukhona izindawo lapho uzokwazi ukuyisebenzisa kalula. Noma ngabe ukubona izithiyo ezingaba khona eziphazamisekile ekubukeni kwakho noma ukuthola nje ukuthi ngabe umuntu uhleli ekugcineni njengogibe yini, ukusebenzisa i-FallGuys Hoplit ESP yakhe neWallhack kuqinisekisiwe ukusiza. Akudingeki ukhathazeke ngokuthi lelo bhanana elingahleliwe likukhipha futhi, ngoba uzokwazi ukubona i-Item ESP ngaphambi kokuthi idlale.
Ufuna ukuzwa amandla amaningi kunalokho owawunethemba lokuwathola kuma-Fall Guys? Ungafihla futhi ugijime nabahamba phambili kubo usebenzisa i-ESP yethu neWallhack, kumane nje kuyindaba yokukhululeka ngethuluzi. Onke amathuluzi wethu kulula ukufaka futhi kulula ukuzuza kuwo, ngakho-ke ulindeni? Thenga ukhiye womkhiqizo namuhla bese siqala.
Isivinini sibulala ama-Fall Guys, yingakho umuntu oshesha kakhulu evame ukuwina konke. Lapho ungagwema zonke izithiyo eziza endleleni yakho futhi ugijimele indlela yakho ekugcineni, uzofika ku-1 cishe ngaso sonke isikhathi! Ukubaluleka kokugenca kwethu ngejubane akunakucindezelwa ngokwanele, ikakhulukazi uma ucabanga iqiniso lokuthi lenziwa ngezifiso ngokuphelele. Ulawula iphesenti lejubane ozothuthukiswa ngalo, ngakho-ke ungakhetha ukulenza licashile, noma ungashaya abamelene nawe emanzini! Akekho ozokushaya kuma-Fall Guys futhi uma nje une-FallGuys Hoplit yokugenca esebenzayo.
Kungaba umehluko wamasentimitha nje ekugcineni komdlalo kuma-Fall Guys, ngakho-ke ijubane lizoba yinto ebaluleke kakhulu okufanele ucabange ukuyithuthukisa. Sheshisa i-Fall Guys yakho nge-Gamepron!
Amanye ama-Fortnite Hacks nama-Cheats
Kunezinye izinto ezimbili ezinkulu ezifakiwe ngaphakathi kwe-hack yethu ye-FallGuys Hoplit, lezo okuyi-Fly Mod ne-Collision Removal. Awudingi ukuthembela ekuhlangabezaneni okungahleliwe ukukusiza ukuthi unqobe futhi, njengoba ungakwazi ukukhuphukela phezulu ngaphezu kwemephu futhi uvikele zonke lezo zingibe. Inhloso yalo mdlalo ukusebenzisa inkambo yezithiyo ngokushesha okukhulu, futhi ukundiza ngayo (ngokoqobo!) Kuyindlela esobala kakhulu yokusondela ezintweni. Ngenkathi abasebenzisi abajwayelekile bengeke bakwazi ukusebenzisa i-Fly Mod bese beqa lonke izinga, yilokho abasebenzisi beGamepron abangakwenza.
Isici sokususa ukushayisana kungenye inketho emangalisayo, ngoba kusho ukuthi akekho umuntu ongakudabukisa! Uma othile kwenzeka ukuthi uyabona ukuthi uyasheshisa futhi ufuna ukukuvimba ekuwineni, abakwazi - ngisho nokuqhutshwa ngengozi kuyinto yesikhathi esidlule lapho usebenzisa i-FallGuys Hoplit hack yethu. Awekho ama-Fall Guys angcono ngaphandle lapho, siyathembisa.
Ama-FallGuys Hacks Imibuzo
Kungani ama-FallGuys ethu e-Hacks
Ama-hacks ethu ngeke akushiye phansi ngemuva nje kokuwalanda. Lapho okunye ukukhohlisa kwe-Fall Guys kusilela khona, siyachuma futhi sinikeze abasebenzisi bethu ifayela le-
isipiliyoni esihle kakhulu. Musa ukuchitha imali yakho kwenye indawo futhi uthenge ukukopela kwakho emthonjeni onokwethenjelwa kakhulu ku-inthanethi! I-Gamepron inikezelwe ekukhipheni (futhi okubaluleke kakhulu, ukuvuselela) amathuluzi asezingeni eliphakeme iminyaka manje.
Kungani ama-FallGuys wethu we-Aimbot
I-FallGuys Hoplit Aimbot yethu izokusiza ukuthi uzuze ubukhulu ngokukuvumela ukuthi ugxile kumklomelo osusondele. Ngeke uphazanyiswe yizinkinga zangaphandle, njengabanye abadlali abangena endleleni yakho, ngoba i-Gameprons 'Fall Guys Aimbot inembile njengoba iza. Noma ngabe ilahlekile ku-Crown ekugcineni noma inkinga nje ejwayelekile, le nketho izosiza.
Kungani ama-FallGuys ESP ethu
I-ESP (i-Extra Sensory Perception) iphelele kubantu abanenkinga yokubona izithiyo noma izitha ezifihliwe. Lapho abantu besendleleni yakho kodwa bengabonakali, kungaba nzima ukubona ukuthi wenzani okungalungile; ngokubonga, ukusebenzisa i-FallGuys Hoplit ESP yethu kuzokwambula umhlaba wonke wolwazi. Ungabona lapho abadlali batholakala khona, kanye namagama abo!
Kungani ama-FallGuys Hoplit Wallhack ethu
Ama-Wallhacks angcono kakhulu kwesokunxele semidlalo edinga ukudubula, akunjalo? Ungayisebenzisa kuma-Fall Guys ukubona izithiyo ezimbozwe izindawo eziqinile, kanye nabadlali - ezilungele uma udlala iTail Tag, Jump Showdown, noma ezinye izifundo ezimbalwa ngaphakathi kwe-Fall Guys. Ukunqoba ngokususelwa enhlanhleni kukodwa akulungile kuma-Fall Guys, kepha ukusebenzisa amathuluzi ethu kungasiza nganoma yini enye.
Kungani i-FallGuys Fly Mod yethu
Ukusebenzisa i-FallGuys Hoplit hack kuzokunikeza ukufinyelela ku-Fly Mod yethu ekhethekile, ikunikeze amandla okundiza esibhakabhakeni njengenyoni. I-Fall Guys ihloselwe ukuba ngumdlalo osuselwa phansi lapho uzulazula khona njengesiphukuphuku, kepha ungavele unike amandla i-Fly Mod yethu bese undiza ngaphezulu komncintiswano! Ukunqoba akukaze kube lula ukukufeza lokhu kuma-Fall Guys.
Ungawalanda kanjani ama-hacks we-FallGuys amahle kakhulu?
Ungalanda ama-hacks amahle kakhulu we-Fall Guys Hoplit khona lapha, njengoba senze inqubo ibe eyisisekelo ngangokunokwenzeka. Abasebenzisi be-Gamepron akudingeki bagxume nge-hoops ukulanda nokufaka i-FallGuys Hoplit hack yethu; ungavele usebenzise i-Gamepron Load / Injector ukulanda nokufaka wonke amathuluzi wethu kwikhompyutha yakho kalula. Kwesinye isikhathi indlela elula iyindlela enhle kakhulu lapho ulanda ama-hacks!
Kungani ama-FallGuys akho abiza kakhulu kunamanye?
Onke amathuluzi wethu awatholakali ngo-100% futhi azogcina ama-akhawunti akho ephephile ngenkathi ekopela, okungenye yezizathu zokuthi kungani kufanele sikhokhise intengo ye- "premium" yemikhiqizo yethu. Kukhona nenani elilinganiselwe lama-slots atholakalayo ngethuluzi ngalinye, okusho ukuthi singakhonza kuphela inani elithile labasebenzisi nganoma yisiphi isikhathi. Ukukopela ngobuhlakani kuma-Fall Guys usebenzisa i-Gamepron!
Sinikeza isikhathi esibekiwe okufanelekile kunoma ngubani. Yonke imikhakha yempilo ifanele ukuthola ukufinyelela, yingakho ukungena kwethu kwe-FallGuys Hoplit kungatholakala kuzinketho zokhiye zomkhiqizo ezi-1-Day, 1-Week, and 1-Month. Uma kufanele uthenge ukhiye wosuku olungu-1 futhi ufuna isikhathi esithe xaxa sokusebenza, ungavele uthenge omunye ukhiye womkhiqizo futhi ugcine izikhathi zobumnandi ziqhubeka.
Awesome UkuwaGuys Hack Izici